အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုသည် Entries သည် HPA ဆုပေးပွဲဖွင့်လှစ်ခေါ်ရန် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Cartoni ကို 'တစ်ဦး SDS tripod အနိုင်ရမည်ဟု' 'ပြိုင်ပွဲမှဆုရရှိသူကိုကြေညာ
နွေရာသီ 2019 ရဲ့အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တပတ်ရစ် Blackmagic ဒီဇိုင်းဦးလွတ်မြောက်
Aja I / O ဟာ့ဒ်ဝဲရီးရဲလ်အချိန်ရစ်ဖစ်များနှင့် Virtual သတ်မှတ်မည် Solutions, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ Flexible ကယ်ယူကူညီမည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် 8K HEVC Media Player ကိုသြဇာ Aja KONA5နှင့် Corvid 88 မြန်ဘို့လည်, Flexible I / O
Aja ဂီယာ Janta တီဗီမှာဘီး Greases
လူသတ်သမား Sonic ဘိ Records ကိုစတင်ရန်မှ Composer Sebastian Robertson ကအတူအပေါင်းအဖေါ်များသီချင်းများ
အဲလက်စ် Martinez Univision NOTICIAS နှင့်အသံရောနှောအနာဂတ်မှာမိမိအခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေး
Big တောင်ပိုင်းညီလာခံ ESPN + လွှအားကစားပလက်ဖောင်းများအတွက် JVC ProHD ကင်မရာများကိုအပေါ် Standardizes
ယင်းကောင်ဘွိုင်ပွဲမှမာရှယ်အီလက်ထရောနစ် '' ကင်မရာများကိုဌာနမှူး
URSA Mini ကိုအပေါ်နယူးသြစတြေးလျသိပ္ပံ Fi ကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော် Quanta Shot Pro နဲ့ DaVinci ဖြေရှင်းရန်နှင့်အတူအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသော
Telestream အတွက် Wirecast ဂီယာ၏ Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများကြေညာ
Qligent ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ပြန်သွားတိုင်းမှ Vision ၏ Analytics မှပလက်ဖောင်းခိုင်မာစေ
ဝိပဿနာတီဗီထောင်အတွက် Streetkings များအတွက် Vice စတူဒီယိုနှင့်အတူပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုကြေညာ
IBC 2019 မှာသရုပ်ပြခံရဖို့ Quicklink အဝေးမှအိုင်ပီ Commentary
ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီရဲ့ Virtual ကမ္ဘာလုံးအထိချဲ့
Home » သတင်း » HPA ဆုပေးပွဲဖွင့်လှစ်အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုသည် Entries သည် Call
Los Angeles မှာကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 2018, 15, ကယ်လီဖိုးနီးယားအပေါ် 2018 ဟောလိဝုဒ် Professional ကအသင်းမှဆုပေးပွဲအခမ်းအနား။ (ရိုင်ယန် Miller ကဓာတ်ပုံ / Imaging က Capture)
HPA ဆုပေးပွဲဖွင့်လှစ်အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုသည် Entries သည် Call
အဆိုပါ 2018 ဟောလိဝုဒ် ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 15, 2018 အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းကဆုပေးပွဲအခမ်းအနား, Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား။ (ရိုင်ယန် Miller ကဓာတ်ပုံ / Imaging က Capture)
အဆိုပါ 14 များအတွက်th တစ်နှစ်, အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA®) သည် HPA အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုနှင့်အတူအောင်မြင်မှုများနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုလိမ္မာပါးနပ်အပေါ်သို့ဆွဲသူကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီချီးမြှောက်မည်။ အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုများအတွက် entries တွေကိုများအတွက်ခေါ်ဆိုခယနေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်း, တင်ပြမေလ 24, 2019 အပေါ်ကိုပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Joachim Zell, EFILM များအတွက်နည်းပညာ VP နှင့် HPA အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုကော်မတီကုလားထိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ပြင်၌စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတို့ရဲ့အနုပညာရူပါရုံနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘို့အရာတွင်တည်ရှိသည် "ဟုပြောသည်။ ဒါဟာဘဝကိုရူပါရုံကိုဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမောင်းကြောင်းကိုရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းတွေကိုထောက်ပံ့အဆိုပါကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖန်တီးမှု palette ကိုချဲ့ထွင်ရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖိအားရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၎င်းတို့၏အလှူငွေ overstated မရနိုင်ပါ။ အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုတစ်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်ဂုဏ်အသရေ, တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ချီးမြှင့်သည်ထိုလယ်၌ကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးခေါင်းဆောင်များအသုံးပြုပုံနှင့်အတိတ်ဆုရရှိသူဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာသင်တန်းပြောင်းလဲပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အရေးပါသောနည်းပညာအောင်မြင်မှုများ၏လကျအောကျခံတိုက်တွန်းပါသည်။ "
ဒီ peer-စစ်ကြောစီရင်ဆုများအတွက်တွေဟာလည်းထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များပါဝင်နိုင်ပါသည်နှင့်၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ရှေ့ဆက်သိသိသာသာခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုရပေမည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့်ဆုရရှိသူခဲ့ကြသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း, ကို Canon, Cinnafilm နှင့် IBM က Aspera & Telestream။ စည်းကမ်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် အွန်လိုင်း
မှာဇွန်လ 22 အပေါ်တစ်ဦးအပြာ-ဖဲကြိုးစက်မှုလုပ်ငန်း panel ကိုမှပစ္စုပ္ပန်လျှောက်ထား IMAX အတွက်စက်ရုံ Los Angeles မြို့။ အဆိုပါတင်ပြချက်ရက်စွဲများနှင့်တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကမကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ ဆုရရှိသူကိုကြိုတင်ကြေညာမည်, နှင့်ဂုဏ်ထူးအတွက် Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၌နိုဝင်ဘာလ 21, 2019 ၏ညနေပိုင်းတွင်အပေါ် HPA ဆုပေးပွဲ Gala စဉ်အတွင်းပေးအပ် Los Angeles မြို့.
အဆိုပါ Gala မှာ HPA ဆုပေးပွဲကိုထပ်ထူးချွန်အရောင်တန်း, တည်းဖြတ်, အသံများနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကြော်ငြာများအတွက် Visual Effects အပါအဝင်အရေးကြီးသောဖန်တီးမှုအမျိုးအစားချီးမြှောက်မည်။ ဤအမျိုးအစားများအတွက် posts များများအတွက်ခေါ်ဆိုခမေလတွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲရာအရပ်ကိုယူစိန်ခေါင်းစဉ်ပံ့ပိုးကူညီအပါအဝင်စပွန်ဆာ၏ရက်ရောမှုမှကျေးဇူးတင်စကား Blackmagic ဒီဇိုင်း။ အဆိုပါ 2019 HPA ဆုပေးပွဲရှိုးစပွန်ဆာအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အဘို့, မှာ Joyce Cataldo ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
ပြီးပြည့်စုံသောစည်းမျဉ်းများ, လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အ entry ကိုသတင်းအချက်အလက်အပါအဝင် HPA ဆုပေးပွဲအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်သည်သွားရောက်လည်ပတ်ကျေးဇူးပြုပြီး www.hpaawards.com.
တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်နှင့်အတူ HPA ဂုဏ်ထူးရောဘတ် Legato - သြဂုတ်လ 14, 2019
လီစိစစ်မှုများခြင်းဖြင့်စတင် hood ကိုနှင့်တွဲဖက် Adapter ကို - သြဂုတ်လ 9, 2019
Pixelworks TrueCut ပလက်ဖောင်းက "Bravest" ကိုရုပ်ရှင်ရုံကို Motion ဆောင်ကြဉ်း - သြဂုတ်လ 8, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida အထောက်အပံ့ တည်းဖြတ်ခြင်း အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HPA ဖားအံဆု SJGolden - ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-04-17
ယခင်: Qligent 2019 NAB Show မှာနှစ်ဦးဂုဏ်သတင်းဆုပေးပွဲအခမ်းအနားဆင်နွှဲ
နောက်တစ်ခု: NAB 2019 မှာ Magewell NDI® Converter ဝင်းတီဗီနည်းပညာ "အကောင်းဆုံးပြရန်၏" ဆုချီးမြှင့်
audio Visual ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ
ဓာတ်ပုံဆရာ / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်
ထုတ်လွှင့်ဗီဒီယို Technician အ
တွဲဖက်ပေး Audio ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး - နွေဦး 2015
ထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်းကို (Virtual Reality)
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း / ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှု
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း ROOM တွင် International
3D အဘို့အဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ motion ဒီဇိုင်နာ - ကန်ထရိုက်အရစ်ကျ
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ & Editor ကို
သုတေသနတွဲဖက်ပါမောက္ခငါ - မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ
ပြီးသွား Editor ကို (စပိန် / အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်)
post ကို PA ဆိုပြီး